ဂေဇက်ရွာမှ လူငယ်တို့စကားဝိုင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂေဇက်ရွာမှ လူငယ်တို့စကားဝိုင်း
Posted by ဇောက် ထိုး on May 12, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
ကျွန်တော်တို့ ဂေဇက်ရွာရဲ့ ရွာလယ်မှာ အလွန်ကြီးမားပြီး အရိပ်လဲ အလွန်ကောင်းတဲ့ ဗိုင်းငင်မကျည်းပင်ကြီးရှိပါတယ်။ ဗိုင်းငင် မကျည်းပင်လို့ ခေါ်ကြတာကတော့ ရွာကအမျိုးသမီးများ ဗိုင်းငင်ကြလို့ ဗိုင်းငင်မကျည်းပင် လို့ခေါ်တွင်ပုံပါပဲ။ အလွန်ပူပြင်းတဲ့ ခုလို နွေရာသီရဲ့ နေ့လည်ခင်းများမှာ အမျိုးသမီးများက ၀ိုင်းဖွဲ့ဗိုင်းငင်ကြသလို ရွာသားများကလဲ ၀ိုင်းဖွဲ့ပြီး ဂုံညင်း ထိုးကြ။ဒိုးလိမ့်ကြပေါ့။မုံ့လက်ဆောင်းသည်…ရွှေရင်အေးသည်စတဲ့ ရွာဈေး သည်များကလဲ အဲဒီ မန်ကျည်းပင်ကြီး အောက်မှာပဲ…လာရောက် ရောင်းကြ ပါတယ်။ရွှေလသာတဲ့ ညအခါမှာတွေတော့ အမျိုးသား လူငယ်လူလတ်များ ၀ိုင်းဖွဲ့စကား ပြောတတ်ကြပြန်ပါတယ်။ ဂေဇက်ရွာ ရဲ့ မမေ့နိုင် စရာတွေ ထဲမှာ ဗိုက်ကလေး ပါသလို…ဗိုင်းငင်မန်ကျည်းပင်ကြီးလဲကျန်မနေခဲ့ပါဘူး။
ဗိုင်းငင်မကျည်းပင်ကြီးဟာ ရွာသူတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ရာ။ ရွာဈေးသည်များရဲ့ ဈေးခင်းကြီး။ လူလတ် လူကြီးများရဲ့ တရားဆွေးနွေးရာ မဏ္ဍာပ်။ လူငယ်များ ရဲ့ လောင်းကစားကွင်း။ ကလေးများရဲ့ကစားကွင်း။လသာတဲ့ ညတွေမှာ လေလေးတဖြူးဖြူးနဲ့ မန်ကျည်းပင်ချေမှာရှိတဲ့ ကွပ်ပြစ်ကြီးပေါ်မှာ ကျင်းပ လေ့ရှိတဲ့ ဒိုင်မဲ့။ စည်းမဲ့..စကားရေလုပွဲတော်များကလဲ အလွန်စည်ကားပြီး ပျော်စရာကောင်းလှပါတယ်။
စကားရေလုတဲ့အကြောင်းအရာက လူပေါ်မှာ မူတည်ပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ ကို စူးစမ်း..လာပြီဆိုရင်တရားကြောင်းဆွေးနွေး ဖြစ်ကြတာများသလို…. ကိုပရီးမီးယားလာတဲ့ညတွေမှာ ဘောလုံးပွဲအကြောင်း ငြင်းကြပါတယ်။ ကိုဗိုက်ကလေးတို့ ဦးဆောင်ပြီဆိုရင်တော့……………..
ကိုစူးစမ်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်းကို အလွန်လေ့လာပါတယ်။ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တဦးထက် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကို ပိုလေ့လာပြီးသိရှိတယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်မိ ပါဘူး။ ကိုစူးစမ်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်တာကလွဲလို့ ရပ်ရေး… ရွာရေးသာရေး…နာရေး..လူမှုရေးစတဲ့ကိစ္စများကို ကျိုးစားဆောင်ရွက်တတ် ပါတယ်။ ညအခါ ဗိုင်ငင်မကျည်းပင်ကြီးအောက်က ဘာသာရေး စကားပွဲများမှာ ကိုစူးစမ်း မပါလျှင် ပွဲမစည်ဟုဆိုရမလိုပါပဲ။ ကိုစူးစမ်းက ဘာသာရေးကြောင်းတရားကြောင်းများကိုမေးလေ့ စူးစမ်းလေ့ရှိပြီး သူအမြင် မရှင်းသောအယူအဆများကိုထောက်ပြတတ်ပါတယ်။ သို့သော်…ပုတ်ခတ်ခြင်း…ပျောင်လှောင်ခြင်း…ထိပါးလိုခြင်းစသည်များတော့ မရှိပါဘူး။ ဗိုက်ကလေးတို့ ကိုသော်ဇင်တို့ အလင်းဆက် တို့ ကိုကြောင် ကြီးတို့ စတဲ့ရွာလူငယ်လူလတ်အများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဖက်က ခုခံကြပါ တယ်။ သူတို့နားလည်သလောက်ရှင်းပြကြပါတယ်။အဲဒီလိုတွေကြောင့်ပဲ ရွာမှ လူလတ်လူငယ်များ ဘာသာရေးကို ပိုပြီးစိတ်ဝင် စားလာကြတယ်။ ပိုမိုလေ့လာရကောင်းမှန်းသိလာတယ်လို့တောင်ဆိုချင်ပါတယ်။ ကိုစူးစမ်းကို သူတို့ မနိုင်လျှင် ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ထံ သွားမေးမြန်းပြီး ပြန်လည် ရှင်းပြကြပါတယ်။ယနေ့ ကဆုန်လပြည့်နေညမှာ ရွာလယ်ဗိုင်းငင် မန်ကျည်း ပင်ကြီးအောက်က အပင်ခြေကွပ်ပြစ်ကလေးမှာ လူငယ်အတော်များများ စုံလင်နေကြပါပြီ။ တယောက်တပေါက် ကိုပြောချင်ရာ ပြောဆိုပြီးနေကြလို့ ဘာရယ်လို့ မည်မည်ရရတော့လဲ မဟုတ်ပါသေးဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကိုစူးစမ်းကစတင်ပြီး အသံလေးမြင့်လို့စကားစလိုက်တာက……….
““ကျွန်တော်…ပြောချင်တာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဟိုတစ်နေ့က တဆုပ် ဆန်ရံပုံ ငွေနဲ့ ဘုရားတည်ဖို့ကိစ္စကို မင်းတို့ ဘယ်လိုမြင်ကြသလဲ..ငါတော့ အဲဒီ အယူအဆတွေဟာ “ဟိုတုန်းက ရွေတိဂုံ ဘုရားကြီးက ရွှေတွေကိုတိုင်းပြည် အတွက်အသုံးချရရင် ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုကြတဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ သဘော သက်ရောက်တယ်လို့ မင်းတို့ မထင်ကြဖူးလား။ ငါတော့ အဲဒီဝါဒကြီးလို့ ထင်တယ်ဗျာ။မင်းတို့ဘုန်းကြီးက ကွန်မြူနစ်ဝါဒများ ဖြစ်နေလား။ ငါစဉ်းစား မိတာပြောတာနော်…””
ထိုအခါ ၇=နှစ်သားကတည်းက မိဘနှစ်ပါးလုံး ဆုံးသွားလို့ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ကကျောင်းခေါ်ပြီး ကျောင်းထား ပညာသင်ပေးလို့ဘုန်းကြီး ကျောင်းကနေ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တက်ရောက်နေတဲ့ မောင်ကံကောင်း ကခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
““အဲ…လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုစူးစမ်း။ အဲဒီညက ရွာထဲကလူတွေပြန်သွားတော့ ကျွန်တော်ကိုဆရာတော်က ပြောပါတယ်။ အင်း…ငါ့ကိုကွန်မြူနစ်လို့ပြော ချင်လဲ ပြောနိုင်တယ်တဲ့။ တကယ်တော့ စကားတစ်လုံးပြောလိုက်တဲ့အခါ အဲဒီစကားကိုကွန်မြူနစ်တို့….ဒီမိုကရေစီတို့..ဆိုရှယ်လစ်တို့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီး တစ်ခုခုအတတ်ခံရရင် အများအားဖြင့်တော့ လွဲတော့တာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင်…ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကို မသုံးသပ်မဆင်ခြင်တော့ဘဲ ၀ါဒတစ်ခုလုံးနဲ့ ဖိချလွှမ်းမိုးမှုခံလိုက်ရပြီးမှ….သုံးသပ်လိုက်ကြလို့ပဲ။
ဘာသာရေးတွေမှာဆိုပိုဆိုးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ…ခရစ်ယာန်..အစ္စလာန်… ဟိန္ဒူ..မဟာယာန…ကျောက်သင်္ဘော…ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ..အဲဒီလိုဝါဒတွေနဲ့ စကား တလုံးကို ဝေဘန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ မမှန်တော့ဘူး။ စကားတခွန်းကို အဲဒီလိုဝါဒ တခုခုထဲဆွဲသွင်းပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီဝါဒရဲ့ လိုအပ် ချက်.. ပိုအပ်ချက်တွေပါ အဲဒီစကားလုံးမှာ တာဝန်တွေပိသွားတော့တယ် တဲ့။အဲဒီစကားလုံးကို အဲဒီဝါဒတွေက ဖုံးဖိသွားတော့တာပဲ။
တကယ်က စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်ဆိုရင် အဲဒီစကားကိုပဲ အကောင်း အဆိုး…လူကိုအကျိုးပြု..မပြု ဝေဘန်သုံးသပ်ရမှာ။ ရွေတိဂုံဘုရားက ရွှေတွေကိုခွာပြီး နိုင်ငံအတွက် အသုံးပြုရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆလဲ တကယ်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လူတွေရဲ့ ယုံကြည် မှုနဲ့ လှူဒါန်းထားတဲ့ အရာတွေကို အဲဒီလိုလုပ်ရင် လှူထားတဲ့လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ကိုစော်ကားသလိုဖြစ်မှာပေါ့။ နောင် ဘ၀ငရဲ့ကျတာ.. မကျတာနဲ့ မပြောပါနဲ့။လက်ရှိမှာကို လှူထားသူ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်… ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို စော်ကားသလိုဖြစ်တာ ဘယ် ကောင်းမှာလဲ…ဒါဟာလဲ လူ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူး။
ခုပြောချင်တာကတော့ နောက်ထပ်ရွှေတွေကိုဆက်လှူနေတဲ့အပေါ်မှာပဲ စဉ်း စားဖို့ပါ။ ရွှေတွေတပြောင်ပြောင်နဲ့ရှိနေတဲ့ဘုရားကို ရွှေတွေထပ်ကပ် တာမျိုး ကိုစဉ်းစားရမှာပါ။ ဘယ်လိုအကျိုးတွေများမှာလဲ။ တချို့ဘုရား တွေဆို ဘုရား ရုပ်ပျောက်ပြီး ရွှေတုန်းကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ အထိဖြစ်လာ ပါတယ်။ အဲဒီလို စကားကို မျှမျှတတ အလယ်အလတ် သုံးသပ်တတ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါ တယ်။
နောက် တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆို ဘုရားတွေကို ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံလို ရွှေတွေမချကြပါဘူးတဲ့။ သူတို့နိုင်ငံတွေ အဲလိုတွေမလှူလို့ဆိုပြီးလဲ မွဲမနေ ပါဘူးတဲ့။ ဟိုတလောက တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားပြောသွားတဲ့ စကားကို ဆရာတော် သိပ်ကြိုက်တာပဲတဲ့။ အဲဒီစကားက ““ကမ္ဘာမှာ.. ဘာသာရေးတွေကနေ လွတ်တဲ့ လူသားတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့ လူ့စည်းကမ်း လူကျင့်ဝတ် လူ့ဥပဒေ ဆိုတာ ရှိသင့်ပြီတဲ့”” အဲဒီစကားကို ဆရာတော် သိပ်သဘောကြ တာပဲ။ ခဏခဏပြောတယ်။
နောက် ဆရာတော် ခဏခဏပြောတဲ့စကားလဲရှိသေးတယ်။ သိပ္ပံပညာရပ် ဟာ သိပ်တိုးတက်တာပဲတဲ့။ လူသားတွေကို အများကြီးလဲ အကျိုးပြုပါတယ် တဲ့။ သိပ္ပံပညာက လူသားတွေကို ဆိုးကျိုးပြုတယ်ဆိုတာက အသုံးပြုတဲ့ လူသားတွေရဲ့ အသိကြောင့်သာ ဆိုးကျိုးဖြစ်ရတာပါတဲ့။ ကျောက်တောင် တွေခွဲပြီး လမ်းတွေဖောက်ဖို့တည်ထွင်ခဲ့တဲ့ မိုင်းတွေကို လူတွေက စစ်တိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ သုံးကြတာဟာ သိပ္ပံပညာရပ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ အသုံးပြုတဲ့ လူ့အသိနဲ့ပဲပိုဆိုင်မယ်ထင်တယ်တဲ့။ အဲဒီလိုသိပ္ပံပညာ တိုးတက်တာကတော့ အမြဲတမ်းစူးစမ်းလေ့လာနေလို့…အသေဆုပ်ကိုင် ထားတာမရှိလို့။ လက်တွေ့သဘောတရားတွေအပေါ်မှာ အခြေခံလို့တဲ့။
ဘာသာရပ်တွေဟာ လက်တွေ့ကိုအခြေခံတယ်။ လက်တွေကို သက်သေပြု တယ်။ လက်တွေ့ကို အခိုင်အမာထားတယ်။
ဘာသာရေးတွေကတော့ သိပ်မတိုးတက်ဘူးလို့ဆိုချင်တယ်တဲ့။ ဘာကြောင့် လဲဆိုရင် ဘာသာရေးဟာ ကျမ်းစာတွေအပေါ်မှာအခြေခံတယ်။ ကျမ်းစာ တွေကို သက်သေထူကြတယ်။ ကျမ်းစာတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ကျမ်းစာ တွေကို အခိုင်အမာထားကြတယ်။ဒါက ဘာသာတိုင်းပဲတဲ့။ ကျမ်းစာနဲ့သာ မကိုက်ရင်တော့ ““ကျားကျားကွာမီးယပ် လို့ လုပ်တတ်ကြတယ်တဲ့”” ဒီစကားတွေကို ဆရာတော်ခဏခဏ ပြောတတ်ပါတယ်။
ထားပါတော့လေ….ကျွန်တော့်ကိုဆရာတော်ပြောတာကတော့ စကား တစ် လုံးကို ၀ါဒတစ်ခုလုံးနဲ့မဖုံးဖိသင့်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့် ကိုစူးစမ်းပြော သလို မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။
ကျွန်တော့်သဘောလေးထပ်စွက်ပြောရရင် ရွှေတိဂုံဘုရားက ရွှေတွေကို ခွာပြီး နိုင်ငံအတွက်အသုံးပြုရအောင်ဆိုတဲ့ အကြံအစည် အပြောအဆို ဟာလဲ မကောင်းပါဘူး။ယုံကြည်လှူဒါန်းထားသူ လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကို စော်ကားရာရောက်ပါတယ်။ ခုဆရာတော်ရည်ရွယ်လိုက်တာက အဲဒီလိုရွှေ တွေကို ချနေဖို့ကိုလဲ စဉ်းစားသုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ ဘုရားသာ သက်ရှိ ထင်ရှားရှိနေမယ်ဆိုရင်…..အဲဒီလိုလုပ်နေတာတွေကို ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်ပြီး ကျေနပ်နှစ်သက်နေမလား။ လူသားတွေ အကျိုးများဖို့…လူသားတွေ ချမ်း သာဖို့…..လောကကြီး စောက်ရှောက်ဖို့ အတွက်….အသိတရားတွေ လူတွေထဲပျံ့နှံ့အောင် အသိတရားဖြန့်ဖြူးရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမယ့် သာသနာ့ဝန်ထန်း(ဘုရားအဆုံးအမတွေပျံ့နှံ့အောင်တာဝန်ထမ်းဆောင် နေ သူ) ရဟန်းတွေကိုတောင် မုန့်တွေအလှူခံရင်လဲ ၂=၃=သပိတ် ထက် ပိုအောင်အလှူမခံကြဖို့…ဆွမ်းကိုလဲ လှူသူမရှိရင် ကိုယ့်ချေထောက် ကိုအားကိုးပြီးအလှူခံစားကြဖို့…..၀တ်စရာမရှိခဲ့ရင်လဲ …လမ်းတွေ့တဲ့အ ၀တ်တွေကို ဖာထေးချုပ်စပ်ဝတ်ကြဖို့…..နေစရာကိုလှူသူမရှိခဲ့ရင်လဲ… သစ်ပင်အောက်တွေ နေကြဖို့…….မှာတမ်းတွေကိုလဲ သတိလေးပြုစေချင် ပါတယ်ဗျာ””
အဲဒီအခါမှာ ကာလသားတွေကြားလဲအမြဲတမ်းလိုလိုပါတဲ့…ကိုဗိုက်ကလေး အားလေးလျှာလေးနဲ့တိုးတိုးလေးငြီးသလိုပြောလိုက်တာက….တက္ကသိုလ် တက်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားပီသပါတယ်။မောင်ကံကောင်းရယ်။ မင်း ပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်လိုက်ရတော့ မရှိကြတော့တဲ့ မင်းရဲ့မိဘတွေ ကိုငါသတိရလိုက်တာကွာ……မင်းခုလိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်ပြီး ခုလိုပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ လူငယ်လေးဖြစ်နေပြီဆိုတာ မင်းမိဘတွေ မြင် ချင်စေလိုက်တာကွာ မောင်းကံကောင်းရယ်။ မင်းကတော့ မောင်ကံကောင်း ဆိုတဲ့အတိုင်း နာမည်နဲ့လူနဲ့လိုပ်ပါတယ်။ငါ့မှာသာ…
မန်ကျည်းပင်အောက် စကားဝိုင်းသွက်သွားအောင် ၀င်ရှုပ်လိုက်မယ်..
အဲဒီအောက်ကသတင်း… ဖတ်ပါ.. မှတ်ပါ.. နို့တိုက်..အဲ..အဲ..လေ့လာငြင်းခုန်ပါ..
သေချာတာကတော့.. ဒီစကားဝိုင်းထဲ.. ငယ်ဖြူ..မိန်းမမုန်းဘုန်းတော်ကြီးများ မပါဖို့ပါပဲ..
Celebs Weigh In on TIME‘s Breastfeeding Cover
The nation’s breastfeeding debate is hotter than ever.
After TIME‘s latest cover — depicting mom-of-two Jamie Lynne Grumet breastfeeding her 3-year-old son as he stands onachair — went viral yesterday, social media sites immediately started buzzing witharange of reactions.
And with so much chatter surrounding the image and ideas behind the cover story, it didn’t take long for celebs to offer their own opinions on the matter.
“@Time no! You missed the mark! You’re supposed to be making it easier for breastfeeding moms. Your cover is [exploitative] & extreme,” first-time mom Alyssa Milano, who has been open about nursing 8-month-old son Milo, Tweeted.
အားပါးပါး ခလေးငယ် ခလေးငယ် ။
မင်းအဖေ နဲ့ နောင်ဂျိမ်ပလေးနေရမှာ မြင်ယောင်မိတယ်။
မီခင်နို့တိုက်ကျွေးရေး အားပေးလှုံဆော်သူဒွေဂ မိခင်တဦးရဲ့ တဂယ်နို့တိုက်နေပုံ ပြတဲ့အမူအယာ မဟုတ်လို့ ကန့်ကွက်ဝေဖန်နေလို့ ကြော်ကြာမယ်ခင်မျာ ပျားတုပ်နေဒယ်..။ ဧကန္နဒေါ့ သဂျီးအိမ်မှာ ငယ်မူပြန် ချိုချိုစို့နေပုံဂို အတုခိုးလိုက်တာနဲ့တူ၏…။
Jamie Lynne Grumet Defends Her Time Magazine Breastfeeding Cover
By Lylah M. Alphonse, Senior Editor, Yahoo! Shine | Parenting –
[Did Time go too far with this cover? (Photo: Time.com)] Did Time go too far with this cover? (Photo: Time.com)”I understand some of the breastfeeding advocates are actually upset about this,” Grumet said as Aram draped himself over her lap and whined. They feel that the cover didn’t show the nurturing side of attachment parenting, she explained as she stroked her son’s back, but “This isn’t how we breastfeed at home. It’s more ofacradling, nurturing situation.”
လှူပြီးသား ရွှေတွေတော့ ခွာရောင်းဖို့ မသင့်
သို့ သော်လဲ ဘုရား ရုပ်ပျက်အောင် ရွှေတွေ အတင်းကပ်နေမဲ့အစား လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးချတာ ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ..
အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့အာရုံရတိုင်း ပြောတတ်တဲ့စကားတစ်ခုက
ဘုရားလောင်းဟာ ရွှေမှုံရွှေစမပြောနဲ့ရတနာအပုံလိုက် ရှိတဲ့ နန်းတော်တစ်ခုလုံး တတ်တာပြပြီး ဘာပကာသနမှမရှိတဲ့
တောက်နက်ထဲ ထွက်ပြီး တရားကျင့်ခဲ့သေးတာပဲ..
ရွှေတွေ ရည်စူးပြီး သွားကပ်နေမဲ့အစား..
တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ကစလို့အဖွဲ့ အသင်းလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ အားဖြည့်ပေးလိုက်ရင်…တစ်တိုင်းပြည်လုံး လက်ငင်း နိဗ္ဗာန် မနှေးမြန်စွာ ရောက်စေသပေါ့ဗျာ..
အူးရေးဗိုက်…. အူးရေးဗိုက်… ရေစက်ခွက်ကဟိုရှေ့ကဟာလေ… လက်ထဲကိုင်နေကြပုလင်းတော့ လောင်းမချလိုက်ပါနဲ့ဂျာ
ကဲ…. ၃ ခွက်ပြည့်ပြီ (အခန်းထဲပြန်ဝင်တော့) ဟီးးးးးးးးးးးးးးး
တင်ပါဘုရား….ဆရာတော်ဗိုက် ဘုရား ရေစက်ချမှ ကုသိုလ်ကရမှာပါလားဘုရား။ ကုသိုလ်ကျတော့ ရေစက်တွေ ချပြီး အကုသိုလ်ကျတော့ ရေစက်မချကြဘူးဘုရား။
မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာတော့ ဗွီဒီယိုတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတွေတင်ပြီး ကွာရှင်းပြတ်စဲရင်တော့ ဆရာတော် ဗိုက်နော်…အရမ်းပူတယ် လျှော့သောက်နော်…စိတ်ပူလို့။
ကိုဇောက်ထိုးနဲ့ နာမည်တူ ကလုန်းတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဗျ။
ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်နှာကိုယ်တော် ဆိုဘဲဗျ။ဒီရက်ပိုင်းမတွေ့ မိဘူး။
ကျနော်လဲ ပြည်ကိုရောက်နေတော့ မသုံးဖြစ်လို့ ပါ။
မန်းကျည်းပင်အောက်က လက်ဘက်သုပ်တို့ရေနွေးအိုးတို့ ပြန်သယ်သွားတော့နော်.
လက်ဘက်တွေ စားရင် ညကျ အိပ်မပျော်ပဲ နေမယ်..
စားဝင်အိပ်ပျော်စေတဲ့..အရည်လေးတွေနဲ့အစားထိုးပြီး ဆွေးနွေးကြရအောင်..
ရွှေတိဂုံဘုရားဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားတွေရဲ့ အသုံးအဆောင်ဓါတ်တော်တွေရှိလို့ လှုပါတယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်သေးတယ်
တကယ်တော့ဘာသာရေးဆိုတာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုကျော်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားပါ
သူကြီး က မဆိုင်တဲ့ ပုံတင်ပြီး မန့်ထားမှတော့ ကျွန်မ လဲ ပြောချင်တာပြောပြီးမန့်မယ်။
ကျွန်မ ရဲ့ လက်ရှိအလုပ်က Boss က အီတလီ လူမျိုး။
တစ်နေ့က အီတလီလူမျိုးအချို့ လာပြီး အစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်။
တစ်ယောက်က အိုင်ပက်ကြီး နဲ့။
ရုံးက ဝိုင်ဖိုင် ချိတ်ချင်တော့ Boss က ကျွန်မဆီလာပြီး ချိတ်ခိုင်းတယ်။
သူ့ဟာကြီးက အီတလီ ဘာသာ နဲ့။
ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်တာ User Name နဲ့ Password ထည့်။
ပြီးတော့ ပေါ်လာတဲ့ Security Certificate အတွက် Accept လုပ်ရုံဘဲ။ ပြီးရော။
အဲဒါကို Boss က မျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်ပြီး “နင်က အီတလီ လိုဖတ်တတ် လို့လား” တဲ့။
ဒီမှာ ပြောချင်တာက တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ စာမတတ်၊ ပေမတတ်၊ ကျမ်းကန် အကိုးအကား မတတ် လဲ ဘဝ သေနည်း/နေနည်း ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ လုပ်သင့်တာတွေကို လက်တွေ့ သုံးနိုင်ဖို့ သိနေနိုင်သလား လို့ပါ။
မောင်ဗိုက်ရေ – အားမငယ်နဲ့ ကွဲ့။ ရမ်းသာတီး။
စကားဝိုင်းဆိုတာ ဒီလိုပဲ ဂျီးဒေါ်ရ
တောင်ပြော မြောက်ပြောနဲ့ပြောရင်းပြောရင်း နောက်ဆုံး ဗိုက်ကလေးဟာ ဘော်ဘီဆော့ခါနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့
ဆရာကန်တော့ပွဲတစ်ခု ကျင်းပတယ် ..
အဲဒီ ဆရာကန်တော့ပွဲကနေ လှူဒါန်းငွေပေါင်း သိန်း (၅၀) ရလိုက်တယ် …
ဒီအခါ အပူဇော်ခံ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလည်း အလှူငွေကို ကျောင်းကိုပဲ ပြန်လှူခဲ့တယ် …
တစ်နေ့တော့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဆီကို လူကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ပြောတယ် ..
အဲဒီ သိန်းငါးဆယ်ထဲက သိန်းနှစ်ဆယ်လောက်ကို မြို့ကြီး တိုးတက်ဖို့အတွက် ပြန်မျှသင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ် …
လူတွေက ဘုရားရှင်ကို ကြည်ညိုလို့၊ ဘုရားရှင်ရဲ့ ကျေးဇူးတွေကို ရည်မှတ်လို့ ဘုရားကို လှူဒါန်းကြတယ် …
အဲဒီလို လှူဒါန်းကြတဲ့အခါ ခုအခါ ဘုရားက သက်တော်ထင်ရှား မရှိတော့ ဘုရားရဲ့ ဓာတ်တော်၊ မွေတော်တွေ တည်ရှိရာ စေတီတော်ကို လှူဒါန်းပူဇော်ကြတယ် ..
အဲဒီထဲကမှ နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက် ဆိုပြီး ပြန်မျှသင့်တယ်လို့ ပြောရင် …
ဤသို့ဤနှယ် ကျုပ်လည်း ထင်ရာမြင်ရာ ဥပမာနဲ့ ရမ်းတီးလိုက်ပါဂျောင်း …
မင်းကတော့ နာမည် နဲ့လိုက်အောင် ကံကောင်းတယ်